Dhukkuba Koleeraa Akkasumas Haqqisaa fi Baasaa Arifachiisaa
Waxabajjii 06, 2019
Itiyoophiyaa keessatti bulchiinsa naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, fi Finfinnee keessatti dhukkubii Koleeraa, haqqee fi gara yaasaa ka’uu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti namoonni 197, Oromiyaa keessatti namoonni 122, Finfinnee keessatti namoonni 6 Somaalee keessatti namoonni 33 akkasumas Tigraay keessatti namoonni 8 walumaa gala namoonni 366 mallattoo dhukkubichaa agarsisuu isaanii ibsamee jira.
Sababaa dhukkuba Kanaan namni 15 du’uu kanneen keessaa 14 bulchiinsa nannoo Amaaraa irraa tokko immo Oromiyaa irraa ta’uun ibsamee jira. Oromiyaa keesssaa dhibeen kun godina Harargee lixaa aanaalee Ciroo fi Odaa Bultuum akkasumas bulchiinsa magaala Baddeessaa ta’uun beekamee jira.
Dhukkuba Koleeraa, haqqee fi baasaa maali? Dr Mootummaa Baqqalaa speshalistii wal’anssa keessoo qaamaa Hospitaala walii-galaa fi kooleejii fayyaa Adaamaa irraa ibsa kennan caqasaa.